Management Yakajairwa - Suzhou Bricmaker Automation Co, Ltd.
Vatengi havangodi chete kusarudza mupi ane yakavimbika michina, yakasimba tekinoroji, yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi uye yenguva dzose kuchinjana kwehunyanzvi masevhisi. Kunyanya kukosha, manejimendi avo anofanirwa kunge ari munzvimbo yekusimbisa manejimendi kuziva, kuzvishingisa.
Simbisa manejimendi manejimendi kuona seyakajairika mashandiro emidziyo, kugadzirisa mashandisirwo emidziyo uye kukwana chikamu, izvi zvichanyatso kugadzirisa zviratidziro zvehunyanzvi uye zvehupfumi zvemabhizinesi, kuwedzera kugona kwehupfumi kwemabhizinesi.
Simbisa data manejimendi manejimendi, mbishi zvigadzirwa, simba rekushandisa, mibairo, zvishandiso, mutero & nedzimwe mutengo wedhata account, kutonga, manejimendi.
1.According to the use of specifications and operating manuals, zvine musoro kushandisa midziyo, rambidza kuti zadzisa kushandisa.
2.Tora kukosha kukuru pre-basa kudzidziswa, kuchinjana nevatengesi, kubva mukusaziva kusvika pakunzwisisa uye kuita basa rakanaka rekuchengetedza zuva nezuva kwemidziyo.
3.Kugadzira chiyero chebhizimusi system, gadzirisa maitiro evashandi, ita shuwa yekuenderera kwese kushanda kwekugadzira uye kushanda.
4.Clear yemakambani mamishini, kuronga maonero emakambani, kusimbisa tsika yemakambani, kugadzira mazano emakambani.
Management kuhwina purofiti
Management manejimendi: Kambani inoteedzera yakareba & yakasimba hupenyu hurefu, panzvimbo pekuti yakakura sei. Chokwadi ita kuti kambani irambe ichivandudza.
Kambani basa: Bricmaker inokupa iwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye tekinoroji mhinduro, kuti ikubatsire iwe kuwana hukuru hwakakura hwehupfumi uye kuona yako wega hupenyu kukosha!